Blockchain iyo Bitcoin ayaa lagu dabaqay Maamulka Dhulka - Geofumadas
Mee, 2016 cadastre, Featured, tabo cusub, egeomates My
Shirweynihii teknolojiyada macluumaadka waxaa ii yimid tifaftiraha joornaal, oo i weydiiyay ku saabsan adeegsiga tikniyoolajiyadda noocan ah aagga Diiwaangelinta Hantida, Cadastre iyo Guud ahaan Maamulka Hantida. Wadahadalku wuxuu ahaa mid xiiso badan, inkasta oo aan xoogaa la yaabay inuu i weydiiyay, iyadoo la tixgelinayo in dhowr bilood joornaalkiisa ay ka daabaceen dal ku yaal kulaylaha Ameerika ee fulinaya. Waxaan u qaatay inay ahayd uun war-saxaafadeed, oo fursaddii aan ku weydiisan lahaa faahfaahin dheeri ah asalkii asalka ahaa la seegay.
Runtu waxay tahay in awoodda fayras ee gaabinta #blockchain iyo #bitcoin aysan ahayn wax layaableh oo layaab leh, maahan oo keliya maxaa yeelay waxay leeyihiin dhiirrigeliyeyaal waaweyn oo ku kala jira qaybaha kala duwan ee shabakadaha bulshada, laakiin maxaa yeelay sidoo kale waa wax aan laga noqon karin in laga jaro falsafadda tikniyoolajiyadan mustaqbalka. ku dhow macaamil ganacsi ee u dhexeeya dhinacyada saddexaad. Maqaalkan waxaan ku soo koobayaa dhinacyada ugu muhiimsan ee shirkadaha wanaagsani habeenkaas Amaretos ku kululeeyeen makhaayad ay la socdaan muusig toos ah oo mara wabiga.
Waa maxay Blockchain
Blockchain waa tiknoolaji loogu talagalay xogta kaydinta daruuro ammaan ah. Xadhigaha iyo noodiska waxay kaydiyaan hawlaha la xiriira sheyga hore ee la abuuray, ku dhawaad ​​suurtagal maaha in la jabiyo.
Adeegsiga tikniyoolajiyaddan arrimaha Maamulka Dhulka, waxay u oggolaaneysaa kaydinta hawsha macaamil iyadoo la adeegsanayo baloogyo lagu xiray daruur. Marka laga hadlayo Diiwaanka Hantida iyo Nootaayada Dadweynaha, silsiladda ma aha oo kaliya sameynta qaybta is xigxigta, laakiin dhammaan xogta xasaasiga ah ee hawlgalka ku saabsan hantida (qiimeynta, hagaajinta, iibka, moorgeejyada, cabbiraadaha, xuquuqaha, jaangooyooyinka, iwm.) daruur qarsoodi ah
Waa maxay Bitcoin
Bitcoin waa tikniyoolajiyad lagu maareeyo lacagta elektiroonigga ah ee u dhexeysa dhinacyada saddexaad. Teknoolojiyadda ayaa u beddeleysa qiimaha lacagta suuqa rasmiga ah lacag qariib ah oo loo adeegsan karo iibsiga u dhexeeya dhinacyada saddexaad oo leh heerar ka hooseeya suuqa rasmiga ah. Unugyada Qadaadiicdu waa nooc ka mid ah is-weydaarsiga elektiroonigga ah ee adeegsada silsiladaha loo yaqaan 'BlockChain silsiladaha' dammaanadda runnimada.
Adeegsiga tikniyoolajiyadan ee Maamulka Dhulka waxay muujineysaa u-beddelashada cinwaan guri unugyada Qadaadiicda, si loogu beddelo ammaan. Xaaladahaas hoostooda, mar haddii cinwaanka la diiwaangeliyo, waxaa lagu kaydiyaa iyadoo la adeegsanayo BlockChain marna loo beddelayo nabadgelyo iyadoo loo marayo Bitcoin, waxaa loo wareejin karaa dhinacyada saddexaad iyada oo aan loo baahnayn dhexdhexaadiyeyaal aad u tiro badan.
Sigaar cabista ama xaqiiqda?
Waxaa jira jahwareer badan oo ku saabsan arintaan, maxaa yeelay xagjirnimada waxaa laga iibiyey wax ka badan howlaha tartiib tartiib ah ee lagu gaari karo waqtiga farqiga oo aan ku xirneyn oo keliya dhinacyada teknolojiyadda laakiin halkii ay ku xirnaan lahayd siyaasadaha iyo xeerarka sharciga. Marka, ka dib Amareto labaad, talaabada ugu horeysa waxay ahayd inaan furno maskaxdeena oo aan qiyaasno waxa dhici doona hadii aan ka fikirno maanta 25 sano kadib, halka gabdhihii nala socday ay si dhib yar ku gaareen bartamihii margaritahoodii koowaad oo ay na arkeen markale. leh weji xiise leh si aan loo tusin jaahilnimadiisa guud ee ereyada ah in xaragada geofumados loo bartay.
Mawduuca ugu fudud ee la codsado waa Blockchain oo ah tiknoolajiyad, iyadoo la tixgelinayo awoodda ay siinayso nidaamka macaamil ganacsi si loo kordhiyo amniga macluumaadka. Waa waxa qof kastaa doonayo, in halkii laga heli lahaa xog ururin oo la jebin karo, kuwani waxay ku dhex jiraan daruuro halkaas oo aan macquul ahayn in laga dhiso silsilad ka kooban xiriiriyeyaal ku jira taxane jajaban oo aan la jabin karin oo adag xitaa fahmo. Tani waxay ku quseyn kartaa labadaba Diiwaanka Hantida, halkaasoo xaaladaha hadda jira ee Hantida ay ku jiraan silsiladda: dhinacyada daneynaya macaamil ganacsi (milkiilaha, nootaayo, sahamiyaha, bangiga, iwm.), Xiriirka lala leeyahay hantida (xaq, xayiraad, mas'uuliyadaha), sheyga saxda ah ee noqon kara wax ama aan la taaban karin (sida hantida aqooneed ama hantida ganacsiga ee saamiyada), tixraackeeda joomatari iyo wixii ka sarreeya dhammaan xarunta LADM, isha ... wax walba, oo taxane ah oo aan joogto ahayn ku jirta silsilad la mid ah silsiladda DNA.
Taasi ma aha sigaar-cabbid, tiknoolijiyadaas horay u jirey waxaana lagu diiwaan-galiyay codsiyo kale.
Dabcan, Blockchain waa teknoolajiyad, ma aha qalab diyaar u ah in la isticmaalo; waa in aad had iyo jeer la dhiso nidaam ama khuseeyaan mid ka mid ah ee hadda jira, iyadoo xaaladda fudud ee farsamada khaaska ah ee heshiiska oo muujinaysa in shirkada waa in laga codsadaa teknoolajiyada Blockchain iyo dabcan awooda khayraadka aadanaha si ay u qabtaan QA oo ku habboon doonaa -ugu yaraan in la fahmo kala badh sida loo sameeyay-.
Dhibaatadu waxay tahay qayb ka mid ah iibinta tikniyoolajiyaddan waa in la aamino in marka la adeegsado Blockchain, xirfad-yaqaanku uusan mar dambe lagama maarmaan u ahayn inuu sameeyo macaamil ganacsi. Laakiin aan ku dabaqno maskax furan, oo ka fikirno tan:
Maxaa dhacaya haddii aan ku raacno tigidhka lacagta lacageed ee dalkayga, oo u dhiganta 10 dollars?
-Waa tayda, tagsi baan ku bixi karaa oo tikitka ayaan ku bixin karaa, dukaan ayaan aadi karaa oo kaar daqiiqad ah ayaan ku iibsan karaa taleefankayga gacanta. Waxay kuxirantahay magaalada aan kujiro, waxaan iibsan karaa kaarka amaahda PayPal ama waxaan ugu diri karaa lacag moobayl anigoon hubin sax ahaanshaheeda.
Haddii ay ahayd 100 dollars ayaa laga iibsan karaa telefoonka gacanta oo badanaa dukaanku waxay xaqiijinayaan in ay sax tahay, mashiinka loo sameeyey si loo xaqiijiyo xaqiiqda.
5,000 oo sano ka hor tani suurta gal ma ahayn in laga fikiro, maadaama isweydaarsigu ahaa alaab, markaa markii faras loo beddelayo goob waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo xirfadlayaal wax ka og fardo si loo hubiyo in kaliya ay caafimaad tahay, laakiin xirfadle la arko shirqool iyo dammaanad qaad in uu ogaa in ayeeyadiis iyo ayeeyadiis ay yihiin milkiilayaasha, iyo laga yaabee xirfadle kale inuu ku qoro hawlgalkaas buug.
Iibsashada iyo iibinta maanta waa mid aad u fudud, sababtoo ah lacagta jireed ama elektaroonikadu waa habka macaamilka u dhexeeya dhinacyada saddexaad kuwaas oo xaqiiqo ahaan la xaqiijin karo waana hawlqabasho la aqbalo.
Tani waa markaa marka Bitcoin soo gasho, maaddaama hanti ay noqotey unugyo qiime leh, sida amniga uu yahay. Maanta waxaan ku iibin karaa shahaadadayda saamiga saaxiibkay baarka ku yaal $ 2,000. Haddii uu doonayo inuu xaqiijiyo xaqiiqada wuu samayn karaa, ama wuu ku aqbali karaa si niyad wanaag ah haddii uu i garanayo oo uu garanayo halka laga heli karo haddii dukumiintigu dhibaato leeyahay. Sidaa darteed, cinwaan hantiyeed, markii la diiwaangeliyo nidaamkan sirta ah, la xaddiday ee sida caadiga ah loo isticmaalo, ee lagu kala wareejinayo dhinacyada saddexaad ma qabsan doono dhexdhexaadiye, haddii milkiiluhu og yahay in mar gacantiisa ku jirta uu isagu leeyahay kuna wareejin karo mid kale badan ama u tag bangiga soo saaray si aad ugu dhigto magacaaga. Dabcan, waxay u egtahay qiiq, laakiin taasi waa waxa ay u maleyn karaan yaa ka iibiyay Godka Macpela Abraham ee daafaha wabiga Urdun.
Marka, Blockchain kaligeed wax kale kama ahan tiknoolajiyad la adeegsan karo horeyba, oo leh dhammaan faa'iidooyinka aan rajeyneyno inaan ka soo baxno. Isaga oo ogsoon in hawlgalka u dhexeeya dhinacyada saddexaad aanu ka gudbi karin waxa sharcigu oggol yahay; Dhexgalka macaamilku wuu sii jiri doonaa, maxaa yeelay waxba isma beddelaan marka laga reebo dammaanadda amniga ee nidaamka jira uu leeyahay. Blockchain wuxuu kordhiyaa amniga sharciga, laakiin ma dhimayo waqtiyada macaamilka haddii shuruudaha sharciga ah ee lagu beddelayo nidaamka nootaayo ku saleysan ficillada ay hor istaagaan; Sidoo kale ma yareynayso kharashka wax kala iibsiga haddii aaladda teknolojiyaddu ay leedahay xaddiditaanno lagu darayo Xafiis Horudhac ah oo ay ku gaari karaan isticmaalaha si dar dar leh ama haddii farqiga internetka ee meelaha miyiga ah uu wali aad u ballaaran yahay, aadna uga yar yahay haddii awoodda qareennada hal-abuurnimadu waxay ku habboon tahay borotokoolka nooca qoraalka iyo sharraxaadda jihooyinka / masaafada iyada oo la adeegsanayo khibradda qareenka.
Si kastaba ha noqotee, Blockchain waa tallaabo weyn. Xaqiiqdii waxay noqon doontaa tiknoolajiyada u oggolaan doonta riyada mid ka mid ah lataliyayaashayda, oo rajeynaya in iibsadaha iyo iibiyaha bangiga ay farta saari doonaan akhristaha sawirka faraha oo ay iibka sameeyaan. Farsamo ahaan taasi waa macquul, laakiin haysashada qawaaniinta sharciga ah, kalsoonida isticmaalayaasha ee xogta iyo xaaladaha si loo badalo maskaxda dadka… waxay ku mashquuli doonaan mucjiso xagga samada ah ama dowlad leh dhaqammo daalim ah ugu yaraan 25 sano oo xiriir ah.
Seeraar waa tallaabada xigta, ee loogu talagalay xaqiijinta iyo adeegsiga lacagta loo yaqaan 'cryptographic currency'. Tani waxay noqon doontaa waxa yareyn doona tirada dhexdhexaadiyeyaasha. Laakiin taas, waxaa jira waddo dheer oo loo maro; gaar ahaan maxaa yeelay waa maaddo ka badan teknoolojiyadda, waa mid dhaqaale, waxay u baahan tahay sharci-dejin maxalli ah iyo waqti, taas oo ah tan u oggolaan doonta isticmaaleyaasha inay fahmaan oo ay aqbalaan. Yaraynta dhex-dhexaadiyayaashu waa wax la samayn karo iyada oo aan la helin Bitcoin, sida waddankaas Bartamaha Ameerika uusan ku sameynayn oo keliya isagoo u wakiilanaya Bangiga suurtagalnimada diiwaangelinta amaahda, ballaarinta ama sii deynta; ficil nootaayo ku samayn jirtay qaabkii hore ee duugga ahaa, waraaqahana ku jiraan galka jaallaha ah; dabcan, wefdi la mid ah kan la siiyay nootaayo iyo xaddidaadda mas'uuliyadaha u dhexeeya caqiidada wanaagsan ee macmiilka, iimaanka nootaayada iyo diiwaanka iimaanka dadweynaha. Tan laga bilaabo in loo beddelo hanti maguurto ah, guurto, ganacsade ama hanti aqooneed qiimeyaal ... inbadan ayaa dhiman.
Laakiin way dhici doontaa. Ilaa iyo inta ay Factom iyo Epigraph ku gaarayaan mashaariic muuqata, doorbidayaa ma ahan dunida saddexaad.
Si daacadnimo ah, waxaan ahay mid aad u fudud sababtoo ah xuduudaha u dhexeeya Blockchain iyo Bitcoin ma aha mid aad u cakiran; waxaa suurtogal ah in la sameeyo oo kaliya Blockchain wax badan oo badan iyada oo aan la qabsan Bitcoin.
Marka laga hadlayo waddankan Bartamaha Ameerika ku xusan ee ku xusan maqaalka majaladda, waxa ay hadda haysataa waa mashruuc tijaabo ah, oo ay ku tijaabineyso tiknoolajiyada Blockchain. Hubaal oo dhan 4 sano gudahood waxay noqon doontaa xaqiiqo la xaqiijiyay oo ku saabsan nooca cusub ee Nidaamka Diiwaangelinta Midaysan, kaas oo qeexitaankiisa farsamo uu ku sheegayo astaamaha aan shaqeynin in nidaamku uu adeegsanayo teknoolojiyada sirta iyada oo loo marayo silsilado iyo sidoo kale amniga. Bitcoin waxay ku jirtaa indhaha kuwa naga mid ah oo u maleynaya in 25 sano ay tahay waqti gaaban.
Waqtigan xaadirka ah ee hadalka, oo aan kaliya soo koobay, gabdhuhu waxay indhaha ku ridayeen margaritaoodii labaad. Waxay ku dhammaadeen inay u soo baxaan inay arkaan rashka ka muuqda biyaha Thames, iyagoo u oggolaanaya muuqaalka dusha sare ee jilibkooda ... kaliya markii aan bilownay inaan ka hadalno sida loo adeegsan karo 'Blockchain' maamulka maareynta 'cadastre' taas oo hubaal fududeyn doonta caqabadaha ugu adag ee sahanka cadastralka ballaaran. iyo qiimeynta ku saleysan xaaladaha suuqa.
Post Previous" Hore Download Google Earth meelaha UTM
Post Next Sida loo abuuro map caado oo aanay u dhiman in isku daygii?Next »